Pamusoro pezvinyorwa zvitsva | Zvazvino Zvinyorwa
Belen | | Vanyori, Noticias, Nhetembo, Nyaya, dzakawanda
Mumazuva ano, munguva dzino dzakatirwisa, dzakatikomberedza, dzinotinzwisisa, zvinyorwa zvakatora shanduko inoyevedza, maringe nezvakange zvichitorwa senge mabhuku
Uye izvo zviri kure nerudo, nhoroondo yenhoroondo, chirevo cheFrance (chandinoda zvakanyanya), nhasi tinowana zvinyorwa zvemunyori zvinotenderedza imwe neimwe yemunhu uye cybernetic fascetas.
Vanyori vanozadzikisa kusvika kwepasirese nekungoita blog kana yavo peji rekuposita. Uye ini ndinozviona sezvakakosha zvisingaiti, sezvo kuoma kwekuti iye, semunyori, atarisane nayo kana achida kutsikisa rakapedzwa basa, haigadzirise, asi kunyanya kana iro zano risiri rekuburitsa bhuku rine X zvemukati, asi zviri nyore, verenga.
Ndakaona blog inonakidza kwazvo, panoshanda munyori weArgentina. Inobatanidza zvinyorwa zvemunhu, zvine makotesheni kubva kuvanyori venguva dzese, avo neimwe nzira vanomiririra ruvara rweblog nemazwi avo.
Ini ndinotenda kuti nhasi, kukosha kweiyo yehunyanzvi chokwadi mumabhuku, kuri mukusvikira kuri nyore kune avo vanoda, vanogona, uye kunyange vanofanirwa kuve vanogashira chiito. Nekuti, pakupedzisira, haisi iyo nzira yakanakisa yekutaura chimwe chinhu?
Ndinozvisiyira kwauri, uye ndinokukoka iwe kubva kublog izvo zvakandibata mazuva ano. http://infimosurbanos.blogspot.com/
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Pamusoro pezvinyorwa zvitsva
Ylka -malalua- akadaro
Kutenda nekurudziro. Ini ndanga ndichifadzwa neblog uye yatove pakati pevandinofarira. Aya marudzi emapeji ndiwo akakodzera kuverenga, hongu changamire, ini ndinoda kuti iyo blogosphere iripo.
Mitsara yakawanda yekunyora!
Pindura kuna Ylka -malalua-
damien debret viana akadaro
Miss; Ini ndinogumburwa nepasipasipace netsaona nemazwi ake, uye ndakavimbika ndakagumburwa. Iwe unonyatsofunga here kuti iyi blog yakaipa kwazvo?
Zvisinei, ndingafarire kuti iwe unditsanangurire imwe nguva, kana uine nguva.
Pindura kuna damien debret viana
DEBRET: Ndinoda kutaura nezve iwe unofungei nezve iro basa remunyori ANGELINA COICAUD DE COVALSCHI
Kuongorora kwakangwara sako
Faulkner uye zano rake
Chii chinonzi Art?, Sekureva kwaTolstoy